Iinqanaba ezi-5 eziphambili zeWebhusayithi kufuneka ukuba uzihlalutye | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 13, 2015 NgoLwesibini, Juni 16, 2015 UJenn Lisak Golding
Ukufika kwedatha enkulu kuzise iincoko ezininzi ezahlukeneyo malunga kubahlalutyi, Ukulandelela kunye nokulinganisa ukuthengisa. Njengabathengisi, siyazi ngokuqinisekileyo ukubaluleka kokulandela umkhondo weenzame zethu, kodwa singoyiswa yinto esifanele ukuba siyilandelela kunye nento esingayiyo; yintoni, ekupheleni kosuku, esifanele ukuchitha ixesha lethu kuyo?
Ngelixa kukho amakhulu eemethrikhi esinokuthi sijonge kuzo, endaweni yoko ndingakukhuthaza ukuba ugxile kwizigaba ezintlanu eziphambili zewebhusayithi kwaye uchonge iimetrikhi ezikwezi ndidi zibalulekileyo kwishishini lakho:
Ngubani otyelele iwebhusayithi yakho.
KUTHENI beze kwindawo yakho.
Ngelixa ezi ndidi zintlanu zenza lula into esizama ukuyilinganisa xa umntu eza kwindawo yethu, eneneni inzima kakhulu xa sizama ukubona ukuba zeziphi iimetriki ezibalulekileyo kwaye zeziphi ezingekhoyo. Anditsho ukuba awunakuthathela ingqalelo iintlobo ezahlukeneyo zeemethrikhi, kodwa njengayo yonke enye into ekuthengiseni, kufuneka sibeke phambili imisebenzi yethu yemihla ngemihla kwaye, nathi ke, senze ingxelo yethu, ukuze sikwazi ukucola ulwazi olunokusinceda yenza iindlela zokuguqula.
Iimpawu zeCandelo ngalinye
Ngelixa iindidi zizicacisa gca, iimetriki ekufuneka zilandelwe kudidi ngalunye azisoloko zicacile. Makhe sijonge kwiindidi ezahlukeneyo zemetrikhi kwicandelo ngalinye:
NgubaniNgelixa wonke umntu angathanda ukwazi ukuba ngubani kanye oza kwindawo yabo, asinakusoloko silufumana olo lwazi. Nangona kunjalo, zikhona izixhobo, ezinje ngedilesi ye-IP, ezinokusinceda ukunciphisa ubungakanani. Esona sibonelelo sikhulu sokujonga i-IP kukuba sinokuthi sixelele ukuba yeyiphi inkampani ebityelele indawo yakho. Ukuba ungalandelela ukuba zeziphi ii-IPs ezi tyelele indawo yakho, uya kuba linyathelo elinye kufutshane ekuchongeni ukuba ngubani. Ngokuqhelekileyo kubahlalutyi izixhobo zihlala zinganiki olu lwazi.
NgobaKutheni le nto umntu esiza kwindawo ene-subjective, kodwa kukho iindlela zokulinganisa esinokuzisebenzisa ukunceda ekuboneni ukuba kutheni. Ezinye zezi zibandakanya: iphepha elindwendwelweyo, ixesha elichithwe kula maphepha, iindlela zokuguqula (ukuqhubekeka kwamaphepha abawatyelelayo kwindawo) kunye nomthombo wokudlulisela okanye uhlobo lwezithuthi. Ngokujonga ezi metriki, unokwenza uqikelelo malunga nokuba kutheni undwendwe luze kwindawo yakho.
Njani: Ufumene njani ukuba undwendwe lwewebhusayithi ungabonisa i-SEM yakho okanye iinzame zentlalo. Ukujonga ukuba uza kukuxelela phi ukuba iinzame zakho zisebenza phi kwaye ziphi, kodwa iya kukuxelela nalapho uphumelela khona imiyalezo. Ukuba umntu ukufumene kukhangelo lukaGoogle kwaye bacofa kwikhonkco lakho, uyazi ukuba into ethile kulwimi lwakho ibanyanzele ukuba benze njalo. Iimetrikhi eziphambili apha ziluhlobo lwezithuthi okanye umthombo wokudlulisa.
IntoniZijonge ntoni iindwendwe mhlawumbi zezona zichanekileyo kwezi ndidi. Imatriki ephambili apha ngamaphepha ahanjelweyo, kwaye unako ukugqiba okuninzi ngolwazi olo.
apho: Okokugqibela, apho undwendwe luphumile lunokuxelela apho baphulukene nomdla khona. Jonga amaphepha aphumayo kwaye ubone ukuba akukho maphepha ahlala esiza. Lungisa umxholo kwiphepha kwaye ugcine uhlonipha, ngakumbi ukuba liphepha lokufika. Unokufumana ngokubanzi apho undwendwe luphume khona kulwazi oluqhelekileyo kubahlalutyi izixhobo ezinje ngeGoogle Analytics kwicandelo lokuguqula indlela.
Ngaba ujonge nganye yezi ndidi kwaye uhlengahlengisa umxholo wakho okanye iwebhusayithi ngokusekwe kwidatha ebuyayo? Ukuba kuvavanywa ukusebenza kwewebhusayithi yakho, kuya kufuneka ubenjalo.
tags: Uhlalutyo lweemetaurhwebo inboundiimetwork